ဆင်ဦးစီး - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ဦးစီး ဟု ခေါ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကွမ်ချန့် (ควาญช้าง) ဟု ခေါ်သည်။ ဗီယက်နမ်တွင်မူ quản tượng ဟု ခေါ်သည်။
ဆင်ဦးစီးများ ပုံမှန်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်များမှာ ချိန်းကြိုးနှင့် မောင်းနှင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ချိတ် ဖြစ်သည်။ ၎င်းချိတ်ကို ချွန်ထက်သည့် သတ္ထုဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဆင်များကို ကိုင်တွယ်မောင်းနှင်ရန်နှင့် လေ့ကျင့်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။
ဆင်များနှင့် ဆင်ဦးစီးများသည် အာရှတိုက် အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းတို့၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးတို့တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု ရှိခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များကို နိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်များက လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးပို့မှုများ ရှိခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလအချိန်တွင် ဆင်ဦးစီးများသည် သစ်တောနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ထို့အပြင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင်လည်း လုပ်ကိုင်ကြသေးသည်။
↑ Weeratunge, Chamalee, The Elephant Gates. Greenleaf Book Group, 2014, p. 104. (Google eBook)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆင်ဦးစီး&oldid=502532" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၀၅:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။